मदिरा उद्योगलाई प्रोत्साहन दिने कि प्रतिवन्ध लगाउने ?
Wednesday,5Dec, 2018 9:18 AM
सरकारले मदिरा नियन्त्रण गर्ने विषयमा नयाँ आदेश जारी गर्न लागेको समाचारहरुले केही प्रश्नहरु जन्माएको छ । प्रहरीले पनि घरेलु मदिरा उत्पादन वन्द गराउन गरेका प्रयासहरु वारम्वार चर्चामा आइरहन्छन् । त्यस अन्तरगत लाखौै लिटर घरेलु मदिरा नष्ट गर्ने काम वर्षेनि हुँदै आएको छ । तर के यी नियन्त्रण विधि वास्तवमा जनपक्षीय र वैज्ञानिक छ ? के यसले जनता र देशलाई फाइदा गरेको छ ? के यसले अपराध नियन्त्रण तथा आर्थिक विकासमा सहयोग पु¥याएको छ ?
सरकारले गर्न लागेका केही आदेशहरु राम्रा होलान् । तर मदिरा उद्योगहरु नयाँ खोल्न नपाउने गर्न लागेको विषय सही नीति होइन । विश्वमा मदिराको वजार धेरै ठुलो छ । सन् २०१५ मा १३४४ अर्ब डलर वरावरको मदिरा विश्वमा विक्रि भएको रेकर्ड छ । यो भनेको नेपालको अहिलेको वजेट मूल्यमा नेपालको ११३ वर्षको सरकारी वार्षिक वजेट वरावर हो । अर्थात विश्वमा एक वर्षमा विक्रि भएको मदिराको रकमले नेपाल सरकारको वजेट ११३ वर्षको लागि पुग्ने हुन्छ ।
एकातिर नेपालले निर्यात व्यापार गर्न सकेन भन्ने विषय सधैं उठिरहेको छ । अर्कोतिर नेपालले निर्यात गर्न सक्ने एक प्रमुख वस्तु मदिरा उद्योग नयाँ स्थापना गर्न नदिने नीति सरकारले ल्याउन लागेको छ । नेपालको बहुसंख्यक जनताले घरमा नै वनाउन सक्ने उद्योग भनेको मदिरा नै होला । विदेशी मदिरा भन्दा विविधता पूर्ण र विविध गुणस्तरका मदिरा यहाँ वन्ने गर्छ । यसको ब्राण्डींग, स्तरियकरण, हाइजेनिक वनाउने आदि विषयको आवश्यकता अहिले छ । सरकारले यस तर्फ वरु सहजीकरण, प्रोत्साहन, प्रचार आदि गर्नु पर्ने हो । आधुनिक प्रविधि र स्थानिय प्रविधिको संमिश्रणवाट विश्व चर्चित मदिराहरु भन्दा माथिल्लो श्रेणिका मदिरा यहाँ उत्पादन गर्न सम्भव छ ।
यसो गर्दा घरेलु मदिरा वेचेर जिविका चलाउन वाध्य नेपालीहरुले ती ठुला उद्योगहरुमा काम पाउने हुन्छ । विदेशी मदिराको प्रतिस्थापन हुन गई अरबौं रुपैयाँ विदेशीने रकम जोगीने हुन्छ र व्यापार सन्तुलनमा सहयोग पुग्दछ । विदेशी मुद्राको अभाव कम हुन्छ ।
आर्थिक वर्ष ०७३–७४ मा १ करोड २३ लाख लिटर वरावरको विदेशी मदिरा नेपालमा आयात भयो । यसवाट ३ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ विदेशीयो । ०७४–७५ मा १ करोड १३ लाख लिटर मदिरा आयात भयो र यसवाट करीव ३ अर्ब रुपैयाँ विदेशीयो । एकातिर करोडौं लिटर विदेशी मदिरा आयात गर्ने, अर्कोतिर नेपाली मदिरा उद्योग नयाँ खोल्न नदिने सरकारी नीति विल्कुल गलत छ । यो उद्योग सवभन्दा वढी नाफा हुने उद्योग पनि हो । यस्तो उद्योग खोल्न किन वन्द गर्ने ?
मदिरा स्वास्थ्यको लागि हानिकारक छ भन्ने थाहा सवैलाई छ । स्वास्थ्य र समाजमा अपराध नियन्त्रण गर्न मदिरा नियन्त्रण गर्न खोजेको हो भने सरकारले पहिला मन्त्रीहरु देखि सरकारी तलब खाने कर्मचारी, जनप्रतिनिधि, सेना, प्रहरी, सबैमाथि मदिरा सेवन प्रतिवन्ध लगाएर नियन्त्रणको थालनी गर्नु पर्दछ । यति वजे देखि मात्रै वेच्न पाइने भन्ने नियम वनाएर व्यापारीहरुलाइ समस्यामा पार्ने भन्दा अरु लाभ हुने छैन । मन्दिर भन्दा यति मिटर वरपर मदिरा वेच्न नपाउने भन्ने कुराको पनि अर्थ छैन । सबै भन्दा वढी मदिरा विक्रि हुने उपत्यकाका धेरै देवी देवता मदिरा पिउँछन् भन्ने सरकारलाई थाहा नभए जस्तो छ ।